Isingeniso soMnyango Wekhwalithi - Wellink
I-Wellink Industrial Tech (Shenzhen) Co., Ltd. Kunabasebenzi abangaphezu kwe-10, okuhlanganisa u-90% abaneziqu ze-bachelor's, amasethi angaphezu kuka-20 emishini yokuhlola eyahlukene, ehlome ngokugcwele ukuhlola nokuhlaziya kwenkampani imikhiqizo ehlukahlukene, futhi bathola i-ISO9001. isitifiketi sesistimu yekhwalithi, isitifiketi se-ROHS sokuvikelwa kwemvelo, i-CE, isitifiketi se-FCC, isitifiketi sikazwelonke se-3C, njll. Umnyango wekhwalithi uhlinzeka ngesevisi yekhwalithi kumabhizinisi anomqondo wesayensi, ubulungisa, ukunemba kanye nobuqotho.
Uhlaka Lwenhlangano Yomnyango Wekhwalithi
Imisebenzi yomnyango wokuphatha ikhwalithi.
1, Hlela ukuhlela, ukuqaliswa, ukugadwa kanye nokubuyekezwa kwesistimu yokuphatha ikhwalithi yangaphakathi yenkampani.
2, Inesibopho senhlangano kanye nokuxhumana kwesitifiketi somkhiqizo.
3, Lungiselela amazinga okuhlola kanye nemininingwane yokuhlola ngokuya ngemibhalo yezobuchwepheshe;ukuhlela nokusebenzisa ukuhlolwa kwezinto ezingavuthiwe, izingxenye ezikhishwe ngaphandle, izingxenye ezithengiwe nezingxenye ezizenzele zona, kanye nokuhlolwa kwezinqubo zomkhiqizo nemikhiqizo eqediwe, nokukhipha imibiko yokuhlola.
4, Hlela ukubuyekezwa kwangaphakathi kwemikhiqizo engahambisani, hlela ukuthuthukiswa kwezinyathelo zokulungisa, zokuvimbela kanye nokuthuthukisa izinkinga zekhwalithi, futhi ulandelele futhi uqinisekise.
5, Inesibopho sokuphatha jikelele amarekhodi ekhwalithi, ukuhlaziywa kwekhwalithi evamile kanye nokuhlola.
6, Inesibopho sokuhlolwa kwekhwalithi yemikhiqizo yenkampani yonke.
7. Ubhekele umsebenzi wokulinganisa, qedela ukulinganisa okujwayelekile kwezinsimbi zokulinganisa futhi wenze amarekhodi okulinganisa kanye nokumaka.
8, Inesibopho sokulawula ukuhlolwa nokulinganisa kanye nemishini yokuhlola ukuze kuqinisekiswe ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo ihlangabezana nezidingo ezishiwo.
9, Bamba iqhaza ekubuyekezweni komphakeli, iqhaza ekuhlaziyeni nasekucubunguleni impendulo yomsebenzisi.
Ukubamba iqhaza okugcwele, izinga eliphezulu nokusebenza kahle, ukuthuthukiswa okuqhubekayo, ukwaneliseka kwamakhasimende
Imishini yokuhlola ikhwalithi